Subsurface 4.7.1: Linus Torvalds Inoburitsa Nyowani Yakagadziridzwa Vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Subsurface 4.7.1: Linus Torvalds Inoburitsa Nyowani Yakagadziridzwa Vhezheni
Linus Torvalds Iye anozivikanwa zvakanyanya nekuve iye musiki weLinux kernel, asi vazhinji havazive kuti akagadzirawo mamwe mapurojekiti, senge inozivikanwa git chishandiso uye zvakare iyo app yevanodhira vanofarira, saiye, anonzi Subsurface. Zvakanaka, ikozvino yaburitsa vhezheni nyowani yakavandudzwa yeakavhurika sosi chirongwa inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu akadai seWindows, macOS uye zvakare GNU / Linux pachayo. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuiwana yakaiswa mumapakeji epasirese seAppImage.
Iyo itsva vhezheni yatiri kutaura nezvayo ndeye Nzvimbo yepasi 4.7.1, iyo inouya nekumwe kutonhorera kugadzirisa uye kugadzirisa. Pakati peshanduko dzinogona kuwanikwa nevanoda kudhizaina mune ino nyowani Kuburitswa, tinogona kutaura new mepu widget, zvakare mukana wekushandura okisijeni icon, rutsigiro rwuri nani rwekunze dive data kubva kuDatatrak, Shearwater, DL7 uye mamwe mafomati evatatu mapato. Asi handidzo chete shanduko dzatichaona ... El data scheduler yakagadziridzwa zvakare mune iyi vhezheni nyowani nekubata nyore, pamusoro pekumhanyisa kwenguva refu yekudzora, kuverenga chirongwa kusiyanisa, kugona kupurinda delta kumanikidza kwemhedzisiro yekuverenga kushoma kwegasi, rutsigiro kuona kuwedzererana kwemadhivha, nezvimwe. Uye zvechokwadi pave paine zvimwe zvakapfuura zvebug fixes uye imwe kodhi optimizations.
Iyo itsva vhezheni Subsurface 4.7.1 zvakare yakavandudza kutsigira kwayo yemadhiraivha emakomputa, saka kana iwe uine izvo zvambotaurwa michina, iwe unenge usingave nezvinetso zvekuenderana. Aya mapoka ndeaya: Aqualung i200, Cochran Commander II, Heinrichs Weikamp OSTC +, Shearwater Perdix AI, Suunto D4f, iDive2 Yakadzika , IDive2 Tech +, iDive2 Mahara uye iDive2 Easy dive makomputa, aimwe iX3M Yakadzika, iX3M Nyore, iX3M Pro Nyore, iX3M Pro Yakadzika, iX3M Pro Tech +, iX3M Reb uye iX3M Tech +, uye inotsigira kutsvagirwa kweOTC 4, pamwe ne Tsigiro yemazhinji matangi maseru ekuzivisa kumanikidza panguva imwe chete. Iko kune kunyange rutsigiro rwekuyedza rwekushambadzira michina neBluetooth LE (isingawanikwe muWindows vhezheni parizvino).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Subsurface 4.7.1: Linus Torvalds Inoburitsa Nyowani Yakagadziridzwa Vhezheni
Maitiro ekumisikidza USB chishandiso kubva kumagumo